Birtukaan Miidhaksaa walittiqabduu Boordii Filannoo ta'u jedhamee eegamaa jira - BBC News Afaan Oromoo
Birtukaan Miidhaksaa walittiqabduu Boordii Filannoo ta'u jedhamee eegamaa jira
Durstuu paartii morkataa kan turan Aadde Birtukaan Miidhagsaa boor Paarlaamaatti dhiyaatanii walittiqabduu Boordii Filannii Biyyaaleessaa ta'anii muudamuuf akka eegamaa jiru maddeen gara garaa irraa BBC'n mirkaneeffateera.
Manni Maree Bakka Bu'ootaa Uummataa boor Yaa'ii isaa Idilee 5ffaa gaggeessuun yaada murtoo walittiqabaa Borrdii Filannoo Biyyaalessaa qoratee mirkaneessa.
Obbo Nabiyyuu Baazezwu bara 1992 keessa yeroo Aadde Birtukaan dhuunfaa isaaniitiin filannoo irratti dorgomuudhaaf murteessan irraa kaasee duula na filadhaa qindeessuufi waltajjiiwan duula na filadhaa mijeessuudhaan akkaataa isaan uummata waliin wal arguu danda'an hojjechuudhaan hirmaatanii turan.
Yeroo paartii Qindoominaa keessa turanis, yeroo Qindoominni diigamee, Paartii Tokkummaa Dimokiraasiifi Haqaa hundeessanis waliin hojjechuu dubbatu.
"Man hidhaa yeroo turan, yeroo hiikaman, irra deebiyuudhaan yeroo hidhaman, yeroo biyya alaa jiranis akkasumas yeroo gara biyyaatti deebiyanis koree simannaa qindeessuun itti dhiyeenyaan hirmaachuu" dubbatu Obbo Nabiyyuu.
Akka Obbo Nabiyyuun jedhanitti Aadde Birtukaan boor Paarlaamaa Itoophiyaatti dhiyaatanii itti gaafatamummaa akka fudhatan dhugaadha jedhu.
Maatiin Aadde Birtukaanis, jaallewwan qabsoo ishees, jaallattoonni ishee boor bakka sagantaan muudamaa itti gaggeeffamu kanatti argamanii akka hordofuu danda'aniif kan ittiin seenan ergameef akka jiru ibsaniiru.
Aadde Birtukaan erga gara biyyaatti deebiyanii booda aanga'oota ol-aanoo mootummaa waliin bakka kamittiyyu yoo ramadaman hojjechuuu akka danda'an erga mariyatanii booda Boordii Filannoo gaggeessuu akka danda'an waliigalteerra ga'aniiru jedhan Obbo Nabiyyuun.
Itti gaafatamummaa guddaadhaan Boordiin Filannoo Itoophiyaa keessatti filannoo dimokiraatawaa ta'e gaggeessuudhaaf kan dandeesisu dhaabbata walabaa hundeessuudhaaf ga'ee bakka ba'uu danda'an kan hojjechuun bu'uura filannoo isaaniiti.
Kaayyoo kana galmaan ga'uudhaaf Boordiin Filannoos bifa haarawaatiin gurmeessuudhaaf qorannoon gaggeeffamaa jira.
"Filannoo dhufu irratti hin dorgomus, dhaabadhes hin taajjabu"
Birtukaan Miidhagsaa: ''Waanti hanga ammaa erga darbee, yeroon amma booda jiru gaarii ta'a''
Siyaasa Itoophiyaa: Paartileen siyaasaa fi Dr. Abiy maal mari'atan?